Gbasara anyị - Ningbo ACE igwe Co., Ltd.
ACE Machinery optimally na-agwakọta ike na finesse iji wetara gị ụlọ ọrụ kachasị mma na igwe ọrụ. Dị ka na-eduga Chinese emeputa nke oké-oru ewu ngwá ọrụ, anyị nwere ike na-enye ndị ahịa a dịgasị iche iche nke raara onwe ya nye akụrụngwa gụnyere mmiri mgbapụta, rebar cutter, rebar bender, ihe hụrụ, na ihe igwekota. Ọzọkwa dị bụ a zuru oke nhọrọ nke ihe akụrụngwa ngwa. Ọmarịcha maka ntọala na nrụzi, ngwaahịa anyị na-ejikarị arụ ọrụ dịka okporo ụzọ, ụlọ, mbara ala, ụzọ ụgbọ oloko, na ọdụ ụgbọ elu.
A kwadoro ngwa ACE site na ụkpụrụ ụlọ ọrụ dịka CE na CCC. Malite na 2009, ndị ọrụ sitere na T theV SÜD Group na-enyocha ụlọ ọrụ anyị na kwa afọ. Ebe ọ bụ na e guzobere netwọk mgbasa ozi anyị na 2005, anyị nwetara ebe mbupụ na mpaghara gụnyere America, Africa, Eastern Europe, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle-East, wdg.
Akwụkwọ anyị dị elu
E debanyere ụlọ ọrụ anyị na 1995 dị ka Zhenxing Construction Machinery Factory. Isi ụlọ ọrụ anyị dị na Yinzhou District nke Ningbo City, oghere China maka agịga vibrator-ọrụ anyị malitere site na iche iche na mpaghara a. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ nke ahụmịhe ahịa mba ofesi enyela anyị ohere ịpụta dịka onye nrụpụta ama ama na ụlọ ọrụ ụlọ. Companylọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị gbatịrị 8,000m2 ebe akụkụ ala nke ụlọ ọrụ anyị gbakọtara ruo 23,000m2. Nso nso na ma ndị Ningbo Port na Lishe International Airport enye anyị adaba lọjistik.
Ihe Mere Chohọrọ Ningbo Ace Machinery Co., Ltd.
Anyị nwere aha ndebanye aha nke nde 1.3 RMB na ndị ọrụ karịrị 120 gụnyere ndị injinia ngwaahịa 3, ndị na-ahụ maka mmepụta ihe 3, ndị na-elekọta ụlọ nkwakọba ihe 4, ndị na-ahụ maka 5 QA, ndị ọrụ arụ ọrụ 8, yana ndị ọrụ aka ọrụ 95. Na 2012, anyị dekọtara ụtụ nke 38 nde RMB. E kewara ụlọ ọrụ anyị na ngalaba ndị nwere onwe ha maka ọkachamara dị ka mmepe, mmepụta, mgbakọ, nlele, idebe ihe ọcha, mmesi obi ike na ọrụ mmadụ. Ahaziri management-enye anyị ohere vitalize na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi na mma eruba usoro mgbe nditịm ịhazi àgwà akara usoro.
Na ngwaahịa mma dị ka anyị nọmba otu mkpa, anyị ga-ike a ika na redefines na ụlọ ọrụ.